अल्ट्रासोनिक विघटन: भिजेको, विघटनकारी, डिस्पर्सिing - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
अल्ट्रासोनिक इन्टिग्रेटरहरू तरल पदार्थमा कणहरू र पाउडरहरू भिजाउन, फैलाउन वा विघटन गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। उच्च प्रदर्शनको अल्ट्रासोनिकेटरहरूले तीव्र शियर फोर्सहरू सिर्जना गर्दछ, जसले ब्रेक र एकत्रित पार्छ, एग्लूमरेट र प्राथमिक कणहरू माइक्रोस्कोपिक वा न्यानो साइजमा। ध्वनिक cavitation क्षेत्र मा एक समान कण प्रक्रिया को एक संकीर्ण कण वितरण र एक समान कण सतह परिणाम।
अल्ट्रासोनिक Disintegrators र तिनीहरूको अनुप्रयोगहरू
अल्ट्रासोनिक विघटनकर्ताहरूले तीव्र कतरनी सेनाहरू वितरण गर्दछ, जसले कणहरू, क्रिस्टल, र फाइबरहरू जस्तै उनीहरूलाई खण्डन गर्न र तिनीहरूलाई लक्षित आकार, जस्तै माइक्रोन वा न्यानो आकारमा विच्छेद गर्न आवश्यक प्रभावहरू सिर्जना गर्दछ। जब वैकल्पिक विच्छेदन विधिहरूसँग तुलना गर्दा जब कि उच्च कतराहरू ब्लेड मिक्सरहरू, उच्च-प्रेशर होमोजिनाइजर्स, मोती मिल, माइक्रोफ्लुइडर आदि। अल्ट्रासोनिक विच्छेदनकर्ताहरूले केही प्रमुख फाइदाहरू प्रदान गर्छन्।
अल्ट्रासोनिक Disintegrators को फाइदा
उच्च-तीव्रता काभेट र कतरन
वर्दी कण प्रशोधन
उच्च ठोस सांद्रता
Nozzles / No Clogging
कुनै मिलिंग माध्यम (जस्तै मोती) आवश्यक छैन
समय- & ऊर्जा कुशल
अल्ट्रासोनिक प्रोब-प्रकार विच्छेदनकर्ताहरूको कार्य सिद्धान्त ध्वनिक cavitation को उत्पादन मा आधारित छ। अल्ट्रासोनिक प्रोबको माध्यमबाट, उच्च-तीव्रता अल्ट्रासाउन्ड तरंगहरू प्रक्रिया माध्यममा प्रसारण हुन्छन् (जस्तै तरल वा घोल)। अल्ट्रासाउंड तरंगहरू तरलको माध्यमबाट यात्रा गर्छन्, जहाँ तिनीहरूले वैकल्पिक उच्च-दबाव, कम-चक्र चक्र सिर्जना गर्दछ। कम दबाव चक्रको क्रममा मिनेट भ्याकुम बुलबुले, भनिन्छ cavation बुलबुले, देखा पर्छ। यी cavitation बुलबुले धेरै दबाव चक्रमा बढ्छ जबसम्म तिनीहरू आकारमा पुग्दैनन्, जहाँ तिनीहरू कुनै पनि अधिक ऊर्जा लिन सक्दैनन्। यस बिन्दुमा, काभेटेशन बबलले हिंसात्मक रूपमा प्रस्फुटन गर्दछ र स्थानीय रूपमा अत्यन्त चरम अवस्थाहरू सिर्जना गर्दछ जस्तै धेरै उच्च तापक्रम, दबाब, चरम तापक्रम र दबाव भिन्नताहरू (उच्च ताप / शीतलन दर र दबावको उतार चढावका कारण), माइक्रो टर्बुलेन्स र तरल धाराहरू सम्म वेगको साथ। १m० मि। ती सर्तहरूले मध्यम कणहरूमा महत्त्वपूर्ण यांत्रिक प्रभाव प्रदर्शन गर्दछ, किनकि उच्च वेग तरल स्ट्रिमहरूले मध्यममा कणहरूलाई तीव्र गर्दछ ताकि कणहरू आपसमा टकराउँदछन्। अन्तर कण टक्कर द्वारा, ठोस पदार्थ (जस्तै, कण, फाइबर, कोशिका) ईरोड, बिग्रिएको र माइक्रोन- र न्यानो-आकार बिट्समा खण्डित।
अल्ट्रासोनिकेसनले सिर्जना गरेको उच्च टर्बुलेन्सले चरणहरू बिच सामूहिक स्थानान्तरण बढाउँदछ र यसले पाउडर वा विवादास्पद रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको विघटनलाई बढावा दिन्छ। यसले अल्ट्रासोनिक डिस्टेन्टिगरेटर्सलाई मनपर्ने उपकरणहरू बनाउँदछन् जस्तै मिलि,, तितरबितर, इमल्सिफिकेशन र विघटन जस्ता प्रक्रियाहरू तीव्र गर्न।
7x अल्ट्रासोनिक disintegrators UIP1000hdT (Xx १kW अल्ट्रासोनिक शक्ति) क्लस्टरको रूपमा स्थापित
रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको अल्ट्रासोनिक तीव्रता (सोनोकेमिस्ट्री) बारे थप पढ्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक Disintegrators को आवेदन
मिलिंग & पीस गर्दै
डिगलगोमेसन & फैलिएको छ
सामूहिक स्थानान्तरण सुधार गर्दै
कण आकार घटाउन को लागी अल्ट्रासोनिक Disintegrators
अल्ट्रासोनिक विच्छेदनकर्ताहरू कण आकार घटाउने र कण वितरणको लागि प्रयोग गरिन्छ, यसको मतलब यसको मतलब प्राथमिक कणहरूको वास्तविक कमिनिशन (मिलि as भनिन्छ) वा एग्लोमेरेट्सको बिच्छेदन (डिग्लुमेरेसन / फैलाव भनेर चिनिन्छ)।
कण आकार वितरण र MM2Si को SEM छविहरू अल्ट्रासोनिक मिलिंग (UM) अघि र पछाडि। (a) कण आकार वितरण; (b) अल्ट्रासोनिक मिलिंग अघि SEM छवि; (c) M०% PVP – %०% EtOH २ घण्टाको लागि अल्ट्रासोनिक मिलिंग पछि SEM छवि।
मिलिंग को लागी अल्ट्रासोनिक Disintegrators & पीस गर्दै
अल्ट्रासोनिक रूपमा उत्पन्न काभेटेशनले तीव्र शियर फोर्सहरू सिर्जना गर्दछ र यसरी सम्बन्धित अन्तर-विशेष टक्कर। घोलमा भएका घनहरूले मिलि medium माध्यमको रूपमा काम गर्छन् (मोती / मोती मिलमा मोती वा मोतीहरूसँग दाँज्न सकिन्छ): तिनीहरू cavitational तरल स्ट्रिमहरू द्वारा तिव्र हुन्छन्, जसले सजीलै १ 180०m / s को वेग हासिल गर्दछ। जब कणहरूले एक अर्कालाई यति विशाल गतिमा हिर्काउँछन्, तिनीहरू भाँच्दछन् र माइक्रोन- र न्यानो-आकारको टुक्राहरूमा चकनाचूर हुन्छन्। अल्ट्रासोनिक विघटनकर्ताहरूले प्राथमिक कणहरू पनि भ break्ग गर्न सक्दछन्। अल्ट्रासोनिक फ्लो सेल रिएक्टरहरूले सबै कणहरूको एक समान उपचारको सुनिश्चित गर्दछ ताकि अल्ट्रासोनिक मिलिंगले एक संकीर्ण कण आकार वितरणको परिणाम दिन्छ।
अल्ट्रासोनिक मिलिंगको बारेमा अधिक जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
Degglomeration को लागी अल्ट्रासोनिक Disintegrators & फैलिएको छ
अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया प्यारामिटरहरू एकदम सटीक रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, ताकि अल्ट्रासोनिक डिस्टेन्ट्रेटरहरूले प्राथमिक कणहरू चक्की गर्न सक्दछ जब उच्च आयाम र माथि उठाइएको दबाब लागू गरिन्छ। अर्कोतर्फ, अल्ट्रासोनिक विच्छेदन प्रणालीहरू कम आयाम र हल्का अवस्थाहरूमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ, ताकि कण संरचना र सतह अक्षुण्ण रहोस्, तर एग्लोमेरेटहरू विभाजित हुन्छन् र व्यक्तिगत कणहरू स्लरीमा समान रूपमा वितरण गरिन्छ।
अल्ट्रासोनिक degglomeration र फैलाव को बारे मा अधिक जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
पायसीकरण को लागी अल्ट्रासोनिक Disintegrators
जब दुई अमिस्कृत तरल पदार्थहरू (उदाहरणका लागि, पानी र तेल) सोनाइटेक्ट हुन्छन्, अल्ट्रासोनिक काभेटेशनले ड्रपलेटहरू अवरूद्ध गर्दछ। – दुईवटा अमिल्दो चरणहरूको धेरै सानो थोपाहरू उत्पादन गर्दै, जुन सँगै मिसाइन्छ। अल्ट्रासोनिक विघटनकर्ताहरूले सजिलै नानो आकारको बूँदाहरू उत्पादन गर्न सक्दछ, स्थिर अल्ट्रासोनिक पायस एक दीर्घ-अवधि स्थिरता र स्पष्ट पारदर्शी उपस्थिति प्रदर्शन गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक न्यानो-पायसीकरणको बारेमा बढी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
विघटनको लागि अल्ट्रासोनिक डिसइन्टेग्रेटरहरू
अल्ट्रासोनिक disintegrators एक द्रुत, सहज र सुरक्षित प्रक्रियामा पाउडर र ट्याब्लेटहरू विघटन गर्न प्रयोग गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक रूपमा उत्पादन गरिएको काभेटेशनले घनको सतहलाई क्षति पुर्‍याउँछ र क्षतिग्रस्त टुक्रा .्गीलाई तरलमा परिणत गर्दछ जसले गर्दा एकसमान समाधान हुन्छ।
औषधि उद्योगमा, ट्याब्लेटहरू भol्ग गर्नु दैनिक कार्य हो, जस्तै विश्लेषणात्मक उद्देश्यहरूको लागि। जब ट्याब्लेटहरू जलीय वातावरणमा पर्दछन्, ट्याब्लेट बिस्तारै बिस्तारै ढिलाइ गर्दछ। साधारण स्टेररर वा ब्लेड आक्रोशकको प्रयोगको साथ पनि ट्याब्लेटहरूको पूर्ण विघटन समय खपत हुने छ। अल्ट्रासोनिक काभेटेशन र यसको असाधारण तीव्र कतरनी सेनाले ट्याब्लेटबाट कणहरू छुट्ट्याउँछ र यसलाई कमजोर बनाउँछ, यसैले ट्याब्लेटको सतह र ताजा, असंतृप्त पातलो बीच निरन्तर द्रुत ट्रान्सफर जारी रहन्छ। यसले अल्ट्रासोनिकलाई अत्यन्त द्रुत र दक्ष प्रक्रिया विघटन गर्दछ, जसले औषधि विघटनलाई मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक भंगको बारेमा अझ बढी पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
पानीमा जेली शिशुहरूको अल्ट्रासोनिक विघटन अल्ट्रासोनिक Disintegrator UP200St
एक मेकानिकल डिसइन्टेरेटरले कसरी काम गर्दछ?
अल्ट्रासोनिक प्रयोगशाला डिस्टिग्रेटरहरूले औद्योगिक विच्छेदनकर्ताहरूले गरे जस्तै उस्तै मैकेनिकल सिद्धान्त प्रयोग गर्दछन्। Disintegrator मिक्सिंग प्रणालीहरूले समुद्री निकास र समुह बिच्छेद गर्दछ, ठोस पदार्थलाई घुलन बनाउँदछ वा तरल मिक्सहरूमा ठोस कणहरू फैलाउँछ। अल्ट्रासोनिक विच्छेदनले एक उच्च-तीव्रता अल्ट्रासोनिक जाँचलाई ब्याच ट्या tank्कमा वा इन-लाइन प्रवाह सेल रिएक्टरमा समावेश गर्दछ। अल्ट्रासोनिक disintegrator को प्रोब (Sonotrode) एक धेरै उच्च आवृत्ति मा तरल मा कम्पन र तरल मा गहन अल्ट्रासोनिक cavitation सिर्जना गर्दछ। प्रत्येक cavitation बुलबुले पतन शक्तिशाली कतरनी सेनाहरु मा परिणाम, कि एग्लोमरेट्स, समुह, र प्राथमिक कणहरु को तोड्न। साथै, अल्ट्रासोनिक cavitation ले 1000km / घन्टा को साथ उच्च गति cavitational स्ट्रीमि produces उत्पादन गर्दछ। काभिटेशनल लिक्विड जेट्सले कण एग्लुमेरेटहरू, फुटेको कोषको भित्तामा निहित गर्दछ, स्लरी भित्र सामग्री स्थानान्तरण सुधार गर्दछ र तरल भोल्युम भर घनहरू फैलाउँछ। अल्ट्रासोनिक cavitation क्षेत्र मा, वैक्यूम र 1000बार सम्म वैकल्पिक चाँडै र बारम्बार दबाव। Mix मिक्सर ब्लेडको साथ एक रोटरी मिक्सर वैकल्पिक दबाव चक्र को समान आवृत्ति प्राप्त गर्न एक आश्चर्यजनक 300,000 RPM मा अपरेट गर्न आवश्यक छ। परम्परागत रोटरी मिक्सरहरू र रोटर-स्टेटर मिक्सरहरूले काभेटको कुनै महत्त्वपूर्ण मात्रा सिर्जना गर्दैन किनकि तिनीहरूको गतिमा सीमितता छ।
नानो-कणहरूको तलको संश्लेषणमा रूचि छ? – यहाँ क्लिक गर्नुहोस् थप पढ्न!
अल्ट्रासोनिक disintegrator UIP2000hdT स्टेनलेस स्टील रिएक्टरमा कण फैलावको लागि
प्रयोगशाला अल्ट्रासोनिक Disintegrators
प्रोब-प्रकार अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू प्रत्येक प्रयोगशालामा एक धेरै उपयोगी उपकरण हुन्। एक अल्ट्रासोनिक प्रोब (Sonotrode पनि भनिन्छ) एक सरल ज्यामिति र सफा गर्न सजिलो टाइटेनियम रड हो जुन एक तरलमा अल्ट्रासोनिक कम्पनहरू जोड्दछ। Hielscher आकार को एक विस्तृत श्रृंखला मा अल्ट्रासोनिक प्रोब र सुझाव बनाउँछ। प्रयोगशालामा घोलहरूको सबैभन्दा सामान्य विघटनको लागि ultra,,, १ 14, वा २२ मिलिमिटर टिप व्यासको अल्ट्रासोनिक प्रोबहरू धेरै उपयोगी हुन्छ। अन्य प्रोब आकार र अनुकूलन आकार अल्ट्रासोनिक प्रोबहरू उपलब्ध छन्। प्रयोगशाला विघटनको लागि विशिष्ट अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू १०० देखि wat०० वाट अल्ट्रासोनिक शक्तिमा।
औद्योगिक अल्ट्रासोनिक Disintegrators
हिल्सचर औद्योगिक विघटनकर्ताहरू उच्च-शक्ति अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरू हुन् जुन ठूलो स्लरी स्ट्रिमको हेवी-ड्यूटी लगातार विघटनको लागि डिजाइन गरिएको हो। यी औद्योगिक प्रणालीहरू सजिलै उच्च ठोस सांद्रता ह्यान्डल गर्न सक्छन्। औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोबहरू फ्ल्यांजसँग सुसज्जित छन् जुन इस्पात ट्याks्क, गिलास रिएक्टरहरू वा कुनै पनि अभिमुखिकरणमा प्लास्टिकको कन्टेनरहरूमा चढ्न सकिन्छ। Sonication पोत वा फ्लो सेल दबाउने आवाज ध्वनी cavation तीव्रता र त्यहाँ Sonication प्रक्रिया। विशिष्ट अल्ट्रासोनिक औद्योगिक विस्थापन उपकरणहरू १००० देखि १,000,००० वाटसम्म अल्ट्रासोनिक पावर प्रति सोनोट्रोडमा हुन्छन्।
उद्योगहरू, जहाँ अल्ट्रासोनिक विघटन व्यापक रूपमा पाइन्छ:
विघटन, विघटन, ठोस / तरल फॉर्मूलेसनहरूको मिश्रण
विश्लेषण अघि नमूना तयारी
चरण स्थानान्तरण प्रतिक्रिया
क्रिस्टलीकरण / वर्षा
कसरी सहि अल्ट्रासोनिक Disintegrator खरीद गर्ने?
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उच्च-प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक विच्छेदनकर्ताहरूको लामो समयको अनुभवी निर्माता हो, जुन कणहरू फैलाउन र भत्काउन वा तरल पदार्थहरूमा पाउडरहरू विघटन गर्न प्रयोग गरिन्छ। बजार नेताको रूपमा, हिलस्चरले अल्ट्रासोनिक डिस्टेन्ट्रेटरहरू र होमोजिनाइजर्स ल्याब र बेन्चबाट पूर्ण औद्योगिक स्तरसम्म डिजाइन र वितरण गर्दछ।
हामी तपाईलाई तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिन तपाईको अनुप्रयोग र आवश्यकताहरूको लागि सब भन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिक विघटनकारी पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछौं।
तपाईको लक्षित अनुप्रयोग के हो?
प्रक्रिया गर्न सकिने विशिष्ट भोल्युम के हो?
प्रक्रिया को महत्वपूर्ण कारक के हो?
के गुणस्तर के हो, जुन हासिल गर्नुपर्दछ?
हाम्रो राम्ररी प्रशिक्षित र अनुभवी स्टाफले कुनै प्रश्न र तपाईंको प्रक्रियाको अवधारणाको लागि तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सले हाम्रो ग्राहकहरूलाई इष्टतम अल्ट्रासोनिक उपकरण फेला पार्न मद्दतको लागि अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरूमा गहन परामर्श प्रदान गर्दछ। तर हिल्सचरको सेवा यहाँ समाप्त हुँदैन, हामी ग्राहकहरुलाई या त उनीहरुको सुविधाहरु मा वा हाम्रो अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया ल्याब र प्राविधिक केन्द्र मा प्रक्रिया विकास, अप्टिमाइजेसन र मापन को दौरान सहायता गर्न को लागी प्रशिक्षण।
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स’ औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर सजिलैसँग धेरै उच्च आयामहरू वितरण गर्दछ, जुन कडा कणहरू र एग्लुमरेटहरू तोड्न वा उच्च ठोस एकाग्रताको साथ स्लरीहरू प्रशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ। हिल्सचर औद्योगिक विघटनकर्ताहरु २ 24/7 अपरेशनमा निरन्तर २००µm को अवधारणाको साथ चलाउन सकिन्छ। अझ उच्च आयामका लागि, अनुकूलित अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोडहरू उपलब्ध छन्। थप सामानहरू जस्तै बूस्टर सीsहरू, फ्लो सेलहरू, Sonication रियाक्टरहरू र पूर्ण recirculation सेटअपहरू सजिलैसँग उपलब्ध छन् र तपाईंको प्रक्रिया आवश्यकताहरूमा निर्दिष्ट गरिएको तपाईंको अल्ट्रासोनिक प्रणाली कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ।
परिष्कृत अल्ट्रासोनिक Disintegrators
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उच्च प्रदर्शन मित्रता र अत्याधुनिक तकनीकी प्रगतिको साथ उच्च प्रदर्शन विघटनकर्ताहरूमा केन्द्रित छ। यसको मतलब यो छ कि हिल्सचर प्रयोगशाला विच्छेदकर्ताको मापदण्ड औद्योगिक मेसिनरीको बुद्धिमतामा अधिक र अधिक अनुकूलन गर्दछ। प्रयोगकर्ताले ब्राउजर रिमोट कन्ट्रोलको माध्यमबाट हिल्सचरको डिजिटल अल्ट्रासोनिकेटरहरू नियन्त्रण गर्न सक्दछ। स्वचालित डाटा रेकर्डि। सफ्टवेयरले सबै महत्त्वपूर्ण अल्ट्रासोनिक प्यारामिटरहरू लेख्छ जस्तै नेट पावर, कुल पावर, आयाम, तापमान, दबाव, समय र मिति CSV फाईलको रूपमा निर्मित SD कार्डमा। यसबाहेक, अल्ट्रासोनिक विच्छेदनकर्ता एक निर्धारित समय वा एक विशिष्ट ऊर्जा इनपुट वा प्रोग्राम पल्सटिंग सोनिकेशन मोडहरू पछि स्वचालित रूपमा बन्द बन्द गर्न प्रोग्राम गर्न सकिन्छ। प्लग्स्टेबल तापमान र प्रेसर सेन्सरले सावधानीपूर्वक नमूना सर्तहरू ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ। तापक्रम-संवेदनशील सामग्रीको तापमान-नियन्त्रण प्रक्रिया परिणामहरूको गुणस्तरको लागि महत्त्वपूर्ण कारक हो, त्यसैले हिल्सचरले प्रक्रियाको तापमान लक्षित तापमान दायरामा राख्न विभिन्न समाधानहरू प्रस्ताव गर्दछ।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिकेटरहरूको परिष्कृत कार्यहरूले उच्चतम प्रक्रिया नियन्त्रण, विश्वसनीय र प्रजनन योग्य Sonication परिणामहरू, प्रयोगकर्ता-मैत्री र काम गर्ने आरामलाई आश्वस्त गर्दछ।
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स’ औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर धेरै उच्च आयाम वितरित गर्न सक्छन्। २००µm सम्मको एम्प्लिट्यूड सजिलै २ 24// अपरेशनमा चलाउन सकिन्छ। अझ उच्च आयामका लागि, अनुकूलित अल्ट्रासोनिक सोनोट्रोडहरू उपलब्ध छन्। यस्तो उच्च आयामहरू चलाउन सक्ने क्षमताले हाम्रो ग्राहकहरूलाई प्राथमिक कणहरू मिलन गर्न सक्षम गर्दछ न्यानो आकारमा प्रभावकारी रूपमा। हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणको मजबुतताले भारी शुल्क र मांग वातावरणमा २ 24/ duty अपरेशनको लागि अनुमति दिन्छ।
गुणस्तर – जर्मनमा बनेको
पारिवारिक स्वामित्वमा रहेको र पारिवारिक रूपमा सञ्चालित व्यवसायको रूपमा, हिल्सचरले आफ्नो अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरको उच्च गुणमा गर्व गर्दछ। सबै अल्ट्रासोनिकेटरहरू बर्लिन, जर्मनीको नजिक टेल्टोमा रहेको हाम्रो मुख्यालयमा डिजाइन, निर्माण र परीक्षण गरिएको छ। हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक उपकरणको मजबुतताले भारी शुल्क र मांग वातावरणमा २ 24/ duty अपरेशनको लागि अनुमति दिन्छ।
तपाईं हिलस्चर अल्ट्रासोनिक विच्छेदनकर्ताहरू सबै फरक आकारमा किन्न सक्नुहुनेछ र मूल्य दायराले तपाईंको बजेटसँग मिल्दो किफायती अल्ट्रासोनिकेटर प्रदान गर्दछ। सानो प्रयोगशालाको शीशीमा कण विच्छेदनदेखि औद्योगिक उत्पादनमा स्लरीहरूको अविरल प्रवाह विच्छेदनसम्म, हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्ससँग तपाईंको लागि उपयुक्त विस्थापनकर्ता छ! कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् – हामी तपाईंलाई सबैभन्दा उपयुक्त अल्ट्रासोनिकेटर सिफारिस गर्न खुशी छौं!